Izimpawu ze-Pharyngitis | Bezzia
UTony Torres | 09/06/2021 23:55 | Izifo
I-Pharyngitis, umphimbo obuhlungu, noma i-tonsillitis? Noma kunjalo la magama avame ukusetshenziswa ngokungakhethi Ukuveza into efanayo, iqiniso ukuthi lezi yizinkinga ezihluke kakhulu. Umphimbo ungalimaza ngenxa yegciwane, elibangela ukuvuvukala elizungeze amalaka, kepha hhayi amalumbo uqobo. Uma lokhu kwenzeka, ikakhulukazi i-tonsillitis engadalwa yizizathu ezahlukahlukene.
Kepha uma kune-pharyngitis, okwenzeka ngqo ukuthi i-pharynx iyavuvukala. Lokhu ukuvuvukala kwenzeka ngenxa yokutheleleka kwamagciwane. Lokhu kutheleleka kubangela ukuvuvukala okukhulu emathanjeni, nakuyo yonke indawo yomphimbo. I-Pharyngitis ihambisana nobuhlungu, umkhuhlane, ubunzima bokugwinya, nokungahambi kahle okuhlala isikhathi esingangesonto.
1 Ziyini izimpawu ze-pharyngitis
1.1 Ukwelashwa kwe-pharyngitis
1.2 Vimbela i-pharyngitis
Ziyini izimpawu ze-pharyngitis
Ubhekene nomphimbo obuhlungu obutholakalayo, kubaluleke kakhulu ukuthatha izinyathelo zokuvimbela ukugwema imiphumela emikhulu. Kodwa-ke, lapho ukutheleleka kwebhaktheriya kwenzeka, kunzima kakhulu ukuvimbela izimpawu ukuthi zivele esimweni ngasinye. Ukuze uthole i-pharyngitis engaba khona, kungcono ukuya ehhovisi likadokotela ukuze ngaphezu kokuxilongwa, nikeza inkambo yama-antibiotic esusa ukutheleleka.
Lezi yizimpawu ze-pharyngitis lokho kungakusiza uhlukanise umphimbo obuhlungu ngezikhathi ezithile kusuka ekungenweni okudinga ukwelashwa ngezidakamizwa.
Umphimbo obuhlungu: The umphimbo obuhlungu kuyisibonakaliso esikhulu futhi esisobala kakhulu se-pharyngitis. Ungabona apingcindezi enamandla entanyeni yakho, endaweni emaphakathi ezungeze amalaka.
Kuvuvukele amalaka: Lapho ukuvuvukala kwepharynx kwenzeka, amalaka angathinteka futhi avuthe kakhulu. Ini ivimbela ukugwinya ngokujwayelekile, kuveza ubuhlungu obuqinile ngisho nangesenzo esilula sokugwinya amathe.
Umkhuhlane: Ukutheleleka kungadala umkhuhlane, kanye ne-malaise ejwayelekile, ubuhlungu bemisipha nobuthakathaka. Lezi zimpawu zifana kakhulu nalezo zomkhuhlane.
I-lymph node evuvukile entanyeni: Ama-lymph node entanyeni atholakala emihlathini engezansi, enamathiselwe entanyeni nasepharynx. Uma ukutheleleka kubalulekile, ama-node angavuvukala kangangoba zibonakala ngeso lenyama.
Ukuphela kwendlela ephumelelayo yokwelapha i-pharyngitis ukuvakashela udokotela wakho. Kubalulekile ukuthi uchwepheshe ahlaziye izimbangela ze-pharyngitis, kanye nobukhulu bayo, ukuze anikeze ukwelashwa okwanele. Ngoba ingozi yokungalapheki kahle kwale nkinga ingaholela ku-pharyngitis engapheli. Ukwelashwa kungangena ekudleni kwe- ama-antibiotic athile kanye nokunciphisa izinhlungu.
Ukudla uketshezi oluphezulu nakho kubaluleke kakhulu, ngoba imfiva ingaholela ekuphelelweni amanzi emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, kufanele kungezwe ukuthi ubunzima bokugwinya kubangela ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ungakutholi ukudla okuqinile. Ngakho-ke, i- ukusetshenziswa kokudla okushisayo okushisayo, umhluzi onomsoco kakhulu, amajusi emvelo egcwele amavithamini futhi-ke, amanzi amaningi.
Ukuphumula kuyingxenye ebalulekile yokululama, ngale ndlela amasosha omzimba angaqiniswa ngenkathi elwa nokutheleleka. Ungasiza futhi umphimbo wakho uphole ngokugcoba nge-baking soda namanzi. Zama ukuphumula ngangokunokwenzeka, ungakhulumi ukugwema ukucasula umphimbo nakakhulu futhi uvumele ukuthi ibuyele ngokugcwele ngaphambi kokubuyela emisebenzini yakho ejwayelekile.
Ukungatholi ukwelashwa okufanele esimweni ngasinye, can kubangele i-pharyngitis ukuthi iholele ezinkingeni ezinkulu njengokutheleleka kwendlebe noma i-sinusitis. Ngakho-ke kubalulekile ukulandela izincomo zochwepheshe maqondana nokwelashwa. Ngaphezu kokuthatha izinyathelo ezidingekayo zokuvimbela, ezibandakanya inhlanzeko yezandla, ukugwema iziphuzo ezibandayo kakhulu noma ukuvikela intamo ezindaweni ezimbi kakhulu.
Ezimweni eziningi izifo zomphimbo zingagwemeka, ukuthatha izinyathelo ezithile eziyisisekelo. Ukuhlala kude nabantu abakhombisa izimpawu ze-pharyngitis kubalulekile, ngakho-ke, uma unezingane ekhaya, kufanele uqinisekise ukuthi abasondeli kakhulu ukubagwema. Ukusetshenziswa kwesifihla-buso, kanye nokuhlanzeka kwezandla okuhle kuzokusiza uvikele umndeni wakho kulokhu nakwamanye amagciwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Izifo » Izimpawu pharyngitis